Ifulethi elinamagumbi amathathu eSamed Vurgun (i-hypermarket yaseBolmart)
Ifulethi litholakala esitezi se-10 sesakhiwo esinezitezi eziyi-17. Inamakamelo ama-3 angawodwa - amagumbi okulala ama-2 nehholo elilodwa, uhlelo lokupholisa umoya oluphakathi nendawo, ovulandi abahlukene aba-2 ababheke iPark of Officers kanye ne-Circus, amakheshi ama-3, i-panorama enhle yedolobha, isitolo esikhulu samahora angama-24 seBolMart esitezi esiphansi. Ukuya emgwaqeni uTorgovaya imizuzu engama-20-25 ngezinyawo, ukuya esiteshini sesitimela saseNizami imizuzu engama-20 ngezinyawo, ukuya esiteshini sesitimela - imizuzu eyi-15. Indawo ephelele yefulethi yi-120 sq. amamitha. Amanzi ashisayo aphakathi nendawo esakhiweni - ngaso sonke isikhathi.
Le ndawo itholakala kumgwaqo odumile waseSamed Vurgun. Phakathi nebanga lokuhamba kunendawo yokuzivocavoca enechibi lokubhukuda (elibonakala kuvulandi), iPaki Yabasebenzi ebukekayo, kanye nezimakethe eziningi ezingami.
Emamitha angama-50 ukusuka endaweni yokuhlala kukhona "iPaki Yamaphoyisa" enhle kakhulu futhi ethandwa kakhulu, inomthombo, inkundla yokudlala yezingane ekhangayo, amathilomu angama-2-3 etiye angajwayelekile, izindawo zokudlela ezi-3-4, izinkantolo zethenisi, igumbi lokuzilolonga, indawo yokuzivocavoca. Indawo yokubhukuda.
Esitezi esingaphansi kwesakhiwo kunesitolo esikhulu samahora angama-24 "i-Bolmart", esitezi sesibili lapho kukhona ne-Mood cafe lapho unga-oda khona i-pizza, ukudla okusheshayo ...
Amamitha angu-100 ukusuka endaweni yokuhlala kukhona i-hammam endala, lapho kutholakala khona ama-saunas aseFinnish naseTurkey. Ngaphesheya komgwaqo yi-Circus kuphela edolobheni. Futhi, ngaphakathi kwamamitha angu-200-300 ungavakashela indawo yokudlela edumile-museum "Shirvanshah", eyavakashelwa ohlelweni "Ukudla, ngiyakuthanda."
Ungaxoxa ku-WhatsApp, Viber, Telegraph, lapho ngingakusiza khona ukushayela itekisi, ngikutshele ukuthi ungafika kanjani kwezinye izinto, amabhishi...